Sidee ku darto hees ama album ama playlist in maktabada xaafadaada iyo maqli offline
Apple Music waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan geeyo music dhufto ee adduunka kaas oo awood kuu si ay u helaan heesaha oo dunida ku baahsan, iyo sidoo kale dhagayso raadiyaha. Adeeggan waxaa laga heli karaa tijaabo ah oo lacag la'aan ah waqtiga ee 90 maalmood ah, isla markaana ka dibna la heli karo laba xubin ka bixisay fursadaha-shakhsiga iyo kan qoyska. Adeeg music Tani waxay ka kooban tahay malaayiin heesaha oo aad dhegaysan kartaa dejisan ama badalo galay playlists. Mid ka mid ah waxyaalaha ugu yaab leh oo ku saabsan adeeg waa in aad sidoo kale ku dari kartaa heeso ku saabsan maktabadda music Apple maktabada xaafadaada ka dibna uu dhegaysan iyagii offline. Offline daawashada waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee ku bixiyeen madal this by tan iyo markii ay kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhagaystaan ​​music aad xitaa marka aan la xiran internetka. Waxaad ku dari kartaa ama sheeg songs in aad rabtid in aad u aragto ka dib marka aad offline tahay in lagu daro. Haddii aad rabto in aad ogaato sida taa loo sameeyo, waxaad ka akhrisan kartaa macluumaadka soo socda la siiyey.
Waxa ugu horeeya ee ay u heeso ama music daro in offline dhagaysto doorasho waa in aad leedahay si loo hubiyo in maktabadda music iCloud waxaa u suurta on qalab aad. Ka dib markii ay sidaas samaynaya, ayaa kuu gudbin kara macluumaadka la siiyo ama tallaabooyinka.
On aad iPhone, iPad ama iPod Touch,
Talaabada 1: tallaabada ugu horreysa waa in ay tagaan app music iyo heli gabaygii, album ama playlist in aad rabto in aad ku darto. Waxaad heli kartaa Music Apple ee app aad iPhone, iPad, iPod taabto, PC ama Mac.
Talaabada 2: haatan ka jaftaa fursadaha icon dheeraad ah oo la siiyo dhinaca midigta ee magaca song ama album in ay sii wadi.
Talaabada 3: Tallaabada saddexaad waa in ay ka jaftaa Samee offline heli karo. Xusuusnow in albums iyo heeso ka soo muuqan My Music hoos> Library halka Playlists muuqan My Music> Playlists ka yar.
On Your PC ama Mac,
Talaabada 1: Haddii aad wareejinta songs, albums ama playlists ka music app Apple aad PC ama Mac, ka dibna aad marka hore u baahan tahay inaad tagto Lugood iyo heli heestii, song ama playlist aad rabto in lagu daro in New ama Waayo, waxaad RIGA, ama raadin Music Apple gudahood. Waxaad ka doorasho kasta ama tab marka laga reebo Lugood Store laftiisa ka raadin kartaa Apple Music.
Talaabada 2: tallaabada xigta waa in guji fursad u siin dheeraad ah oo ku saabsan dhinaca midigta ee magaca album ama song in ay sii wadi.
Talaabada 3: Xusuuso in aad waxba badbaadin karin waxyaabaha in ay dhagaystaan ​​offline ka dukaanka Lugood. Sidaas daraadeed waxaad u baahan doontaa inaad guji icon daruurtii midigta ee magaca heesta oo ah jaldiga album ama si xaq ah magaca playlist ah. Xusuusnow in albums iyo heeso ka soo muuqan My Music hoos iyo playlists inta badan ka soo muuqan galeeysid ee tab playlists ah kaas oo ka yimaadaa hoos Music Apple ee Playlists.
> Resource > Music > Apple Music Download Free